Ndezvipi zvinhu zvaunofanirwa kunge uri kuyedza mune yako email Campaigns? | Martech Zone
Ndezvipi zvinhu zvaunofanirwa kunge uri kuyedza mune yako email Campaigns?
NeChishanu, Gunyana 25, 2015 Muvhuro, Kukadzi 7, 2022 Douglas Karr
Tichishandisa inbox yedu yekuisa chikuva, takaedza mwedzi mishoma yapfuura kwatakadzokorora mitsara yenyaya dzetsamba. Mhedzisiro yacho yaishamisa - kuiswa kwedu mubhokisi reinbox kwakawedzera nepamusoro pe20% pamhando yembeu yatakagadzira. Icho chokwadi ndechekuti bvunzo dzeemail dzakakodzera kuisirwa mari - sezvakaita maturusi ekukubatsira kuti usvike ikoko.
Fungidzira iwe uri webhu rinotarisira uye iwe unoronga kuyedza akawanda makemikari kuti ubude nefomula chaiyo. Zvinoita kunge rinotyisa basa handiti? Zvakafanana nenyaya ine vatengesi veemail! Kurwira kutarisisa kwevanyori vako mubhokisi ravo rekushandisa zvinoreva kuti iwe unoda ot kuwana nzira yakanakisa yekuita navo. Izvo zvakakosha kuyedza akasiyana maficha eemail yako kushambadzira kuti uwedzere uye nekuvandudza yako email chiteshi.
Kuongorora A / B - inofananidza maviri mavhezheni eimwe musiyano kuti uone iyo vhezheni inoburitsa yakanyanya kuvhura, kudzvanya, uye / kana shanduko. Iyo inozivikanwawo sekuparadzanisa kuyedzwa.
Kuongorora Kwakawanda - inofananidza anopfuura maviri mavhezheni eemail ane misiyano yakawanda mukati meiyo mamiriro eemail kuti uone kusanganiswa kwezvakasiyana zvinoburitsa zvakanyanya kuvhura, kudzvanya, uye / kana shanduko. Iyo inozivikanwawo seMV kana 2 Kusiyana kwekuyedzwa.
Iyi infographic kubva kuchikwata chikuru paemail Monks inobatsira kumisikidza mutsauko nesimba re A / B kuyedza maringe neMultivariate Kuedza sezvo ichienderana nemisangano yeemail. Inosanganisirwa iwo matanho anobatanidzwa kubata yako email mushandirapamwe kuyedza, masampuro ekuti iwe ungaseta sei yako A / B uye multivariate bvunzo, nhanho dzinosanganisirwa kusvika pamhedzisiro, pamwe nezvipfumbamwe zvinhu zvekuyedza:
Dana kuAte - saizi, ruvara, kuiswa uye matauriro.
Personalization - kuwana personalization kurudyi zvakakosha!
Nyaya Yenyaya - edza yako misoro yezvinyorwa zvekuiswa kweinbox, yakavhurika uye mitengo yekutendeuka.
Kubva Line - edza musanganiswa wakasiyana wechiratidzo, kutsikisa, uye zita.
patani - ita shuwa kuti ndizvo inopindura uye inotyisa kune vese email vatengi.
Nguva uye Zuva - Iwe unogona kushamisika kana vanhu vachivhura maemail ako! Kuvatumira kuti vafungidzire kufamba kwavo kunogona kuwedzera kubatikana.
Rudzi rweZvipo - Bvunzo misiyano yezvipo zvako kuti uone kuti ndeapi anoshandura akanakisa.
Email Kopa - Inoshanda inopesana nezwi rekungoita uye rakapfava, kunyora kunonyengetedza kuchaita mutsauko wakakura mukuzvibata kwevabatsiri vako
HTML maringe naPlain Chinyorwa - Kunyange maemail eHTML ari ese hasha, kuchine vanhu vanoverenga mavara akajeka. Vape pfuti uye tarisa mhinduro.
Zvimwe zvekuwedzera zviwanikwa pa Email Kuedzwa
Kissmetrics - Nhungamiro Yekutanga kune A / B Kuedza: Email Campaign Inoshandura
CrazyEgg - 6 Email A / B Miedzo Unogona Kumhanya Nhasi (Uye Tora Mhedzisiro)
Tags: zuva rakanakisa rekutumira emailnguva yakanakisa yekutumira emailemail a / b kuyedzaemail kufona kuitaemail mushandirapamwe kuyedzaemail kopiemail kopi kuyedzaemail ctaemail dhizainiemail infographicemail mumongiemail mamongiemail multivariate kuyedzaemail kupa kuedzwaemail inopatsambambozha personalizationemail inopindura dhizainiemail scalable dhizainiemail nyaya mitsaraemail kuedzaemail nguva uye zuvaemailmonkshtml maringe nerugwaro
API inomirirei? Uye Mamwe maAcronyms: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL
Kugadzira Rwendo rweKutenga rweVatengi
Apr 17, 2015 pa 1: 28 AM
Ndatenda zvikuru nekugovera iyi Doug! Tinotenda nerutsigiro rwenyu.